गायक बन्न रिक्सामा चाउचाउ बेचेँ - Samata Khabar
१६ भाद्र २०७४, शुक्रबार ०६:४५
चर्चित सांगितिक रियालिटी शो नेपाल आइडलको ‘टप सिक्स’बाट बाहिरिएपछि सुरज थापाको चर्चा झन चुलिएको छ। उनले जीन्दगीमा गायक बन्नकै लागि धेरै संघर्ष गरेका छन्। नेपालखबरले बिहान–बिहानै टेलिफोन गरेर उनीसँग हिजोआजको दैनिक बुझ्न खोजेको छ:
म भर्खरै उठेँ। आजको कार्यक्रम तालिका हेर्दैछुँ। अरुबेला बिहान सात बजेतिर उठिन्थ्यो,राती ढिला सुतेकाले आज अलि ढिला भयो।
राती सधैँ ढिला सुत्नुहुन्छ, हो ?
प्रायः १२ बज्छ। साथीभाईसँग गफगाफ र कार्यक्रमको सेड्युल मिलाउँदा ढिलो भइदिन्छ।
अचेल मेरो स्वास्थ्य अलि ठिक छैन्। घाँटी दुखिरहेको थियो। त्यसैले हिजो पनि म डेरा(काठमाडौं,वनस्थली)मै बसेँ। त्यसैले कार्यक्रमका लागि कुरा गर्न खोज्नेलाई पनि घरमै बोलाए,इन्टरभ्यू पनि घरमै बोलाएर दिएँ।
करिब चार महिनाको बसाईपछि नेपाल आइडलबाट बाहिरिँदा माहोल कस्तो पाउनुभयो ?
भित्र बस्दा बाहिरको बारेमा केही थाहा थिएन। कसैलाई भेट्न पाइदैन थियो। बाहिर निस्किएपछि आफ्नो ‘क्रेज’ देख्दा म आफै छक्क परेँ। यस्तो त मैले सोचेको पनि थिइनँ। बाटोमा हिड्दा पनि ‘तपाईं नेपाल आइडलको सुरज होइन?मैले तपाईंलाई भोट गरेको थिएँ तर हामी सबैलाई रुवाएर निस्कुनभयो’ भन्दै प्रतिक्रिया दिनेहरु धेरै भेटेँ। कोही दौडिएर अटोग्राफ लिन पनि आउनुभयो। यस्तो माहोलले आफूलाई सेलिब्रिटी भएको महसुस गराउँथ्यो।
तपाईंले त साँच्चिकै आफू हाँसेर अरुलाई रुवाउनुभएकै हो नि, होइन र?
मलाई प्रेम गर्ने, मप्रति शुभेच्छा राख्नेहरु रुनुभयो। यो नेपाल आइडलमा पुगेर मैले कमाएको ठूलो कुरा हो।
अहिले नै रुवाउने बेला भएको थियो जस्तो लाग्छ?
मैले सोचको थिइनँ। फ्यानहरुको सपोर्ट एकदमै थियो। त्यसैले अझै माथि पुगिएला भन्ने लागेको थियो। तर यो प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धामा हारजित भइहाल्छ। प्रतिस्र्पधामा हारे पनि मैले धेरैको मन जितेको रहेछु। जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ भन्ने लाग्छ।
अहिले जसरी तपाईंको चर्चा भइरहेको छ, तपाईंको करिअरका लागि त्यो पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ?
मैले संगीतमा संघर्ष गरेको १४ वर्ष भइसक्यो। तर यत्रो समय गुमनाम नै थिएँ। कसैले मलाई चिन्नु हुँदैनथ्यो,कसैको सपोर्ट थिएन। यो चर्चा मेरालागि पर्याप्त छैन किनकी यो त क्षणिक हो। अब मेरो वास्तविक संघर्ष त बल्ल सुरु भयो। सायद यो चर्चाले गर्दा मलाई मेरो सांगितिक यात्रामा सहज चाहीँ पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले धेरै मिहनेत गर्न त बाँकी नै छ।
नेपाल आइडलबाट आउट भइसक्नुभएको छ, त्यहाँको गोप्य कुरा बताइदिनुस् न?
त्यस्तो गोप्य त के होला र? बिहिबारको शोको सुटिङ एकदिन अगाडी हुन्छ, शुक्रवारको त्यँही दिउँसो हुन्छ जुन कुरा दर्शकलाई थाहा नहुन सक्छ। अर्को कुरा त्यहाँ हामी प्रतिष्पर्धीहरु एकदमै मस्ती गथ्र्यौ। तर त्यहाँ रहँदा प्रतिष्पर्धीले कसैलाई भेट्न पाउँदैनन्, फोन पनि प्रयोग गर्न पाइदैन। जहाँ जादा पनि आइडलको टिमले लिएर जाने हो। कहिलेकाँही मुभी हेर्न पनि लानुहुन्थ्यो।
घरमा पनि कुरा गर्न पाइँदैन, न्यास्रो त लाग्दो हो?
हो, गाह्रो त हुन्थ्यो। हप्तामा एक दिन एक–दुई घण्टामात्र बोल्न पाइन्थ्यो। भित्र एकदमै अनुशासन छ।
नेपाल आइडलबाट आउट भएपछि तपाईंले असिस्टेन्ट राख्नुभएको हल्ला छ नि?
होइन। खासमा म अहिले बिरामी भएकाले मसँगै बस्ने मेरो बेस्ट फ्रेन्डले मलाई हेल्प गरिरहेको छ। उसले कार्यक्रमको डिल गर्न सहयोग गरिरहेको मात्र हो। म निको भएपछि सबै आफैँ हेन्डल गर्छु।
१४ वर्षसम्म संघर्ष गरेँ भन्नुभयो। यो बीचमा आफू गायक बन्नका लागि जीवन के–केसम्म गरियो ?
मैले ०६० सालमा एसएलसली दिएपछि गायक बन्ने सपना बोकेर काठमाडौं आएँ। बुबा इन्डियन आर्मी भएकाले उहाँको सपना इन्डियन आर्मी बनाउने थियो। बुबाको सपना लत्याएर म म्युजिकमा आएँ। ममीले साथमा दुई हजार थमाइदिएर काठमाडौं पठाउनुभएको थियो। त्यसपछि यहाँ आएर आरआर क्याम्पस जोइन गरियो। सोचजस्तो काम पाउने सम्भावना थियो। तर गुजारा त जसरी पनि चलाउनुथ्यो। त्यसेले मैले गायक बन्नका लागि रिक्सामा चाउचाउ, चिजबल बेच्ने काम गरे, घरघरमा पुगेर सेम्फु, परफ्युम, क्रिमहरुको मार्केटिङ पनि गरेँ । कपडा पसलमा भुई पुछ्ने, सिसा पुछ्ने काम पनि गरेँ । एउटा एफएममा गायन प्रतिष्पर्धामा जितेपछि संगीत गुरु लाक्पा शेर्पासँग् एकवर्ष म्युजिक सिक्ने अवसर पाएँ। उहाँले मलाई दोहोरी साँझमा हार्मोनियम बजाउने काममा लगाइदिनुभयो। गजल रेष्टुरेन्टमा पनि गाएँ। पछि आफ्नै सुत्र ब्याण्ड पनि खोलेँ । पैसा कलेक्सन गरेर हरेक वर्ष एउटा गीत रेकर्ड गर्थे। १० वर्षमा एउटा एल्बम पनि निकालेँ । तर एल्बम बिकेन । गीत पनि अलिअलि मात्र चल्योँ । बहराइनमा दोहोरी साँझमा एक वर्ष काम पनि गरेँ। त्यही कमाएको पैसाले गीतको भिडियो बनाएको थिएँ।
जताततै आफ्नो चर्चा भइरहेको बेलामा आफ्नो संघर्षका दिनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
त्यतिखेर दुःख नगरेको भए अहिले यो ठाउँमा हुँदिन थिए भन्ने लाग्छ। मेरो गायनमा फिल ल्याउनलाई ति संघर्षले मद्दत गरिरहेको छ। नाम कमाउनका लागि मैले धेरैथोक गरेँ। इन्डियन आइडलमा समेत भाग लिएँ। थर्ड राउन्डसम्म सहभागी पनि भएँ।
इन्डियन आइडलमा पुग्दा त तपाईंलाई नेपाली अरिजित सिंह भन्थे रे?
हो। मेरो हुलिया हेरेर धेरैले मलाई त्यस्तो भनेँ। फोटो खिचाएँ। मैले मुम्बईको होटलमा गाउन थालिसकेको थिएँ, नेपाल आइडल सुरु हुनेभएपछि नेपाल आएको हुँ। मेरो सपना अहिले यहाँ आएर पुरा भयो ।
नेपाल आइडलमा गाउँदा तपाईंहरुले गाउने गीत कसरी छनौट हुन्थ्यो ?
संगीत गुरु र जजहरुले थिम दिनुहुन्थ्यो । कहिले लोक, कहिले नारायण गोपाल त के विषयमा हुन्थ्यो । १५–२० गीतको लिष्टमध्ये एउटा छानेर गाइन्थ्यो।
अहिले त कार्यक्रम र गीतको अफरै–अफरको वर्षा होला ?
एकदमै धेरै अफर आइरहेको छ। मेरो पहिलो शो आउँदो बुधबार रिफ रेष्टुरेन्टमा हुँदैछ।
पारिश्रमिक पनि राम्रै मागिरहनुभएको होला ?
ठ्याक्कै यति त नभनौँ। तर अफर गर्दा नै सम्मानजनक अफर आइरहेको छ। पहिलेको भन्दा राम्रो छ।
एक लाखभन्दा बढी ?
त्यँही सेरोफेरो भनौँ न।
आइडलबाट बाहिर निस्किएपछि कस्ता–कस्ता फ्यान भेट्नुभयो?
दुःख प्रकट गर्ने र मेरा लागि आँशु बगाउने फ्यान धेरै भेटेँ ।
मरिहत्ते गर्ने युवती फ्यान पनि होलान्?
एकदमै क्रेजी फ्यान पनि छन्। भेट्नलाई आतुर छु भन्ने र एकचोटी फोटो खिच्न मन छ भन्नेहरु धेरै छन्।
गलफ्रेन्ड छ कि छैन् ?
मेरो ध्यान प्रेममा कहिल्यै गएन। कसरी संगीतमा स्थापित हुनेमा मात्र ध्यान छ। सबैभन्दा पहिला मलाई मेरो आमाबुबाको सपना पुरा गर्नु छ। मैले उहाँहरुलाई धेरै सुःख दिन सकेको छैन्। सबैले गाउँमा पक्की घर बनाइसकेँ। मेरो अझै ढुंगामाटोले बनाएको कच्ची घर छ। त्यसैले मलाई पक्की घर बनाउनु छ।
प्रकाशित १५ भदौ २०७४, बिहिबार | 2017-08-31 11:29:51